Baarlamaanka oo wax ka bedel ku sameeyay qodobo ka mid ah Dastuurka. | RADIO Haatuf
Home / WARARKA MAANTA / Baarlamaanka oo wax ka bedel ku sameeyay qodobo ka mid ah Dastuurka.
Baarlamaanka oo wax ka bedel ku sameeyay qodobo ka mid ah Dastuurka.
OgaalFM- Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta wax ka bedel ku sameeyay labo qodob oo ka mid ah Dastuurka KMG ah, iyadoo kulankii maanta ay isugu yimaadeen Xildhibaanada uu shir guddoominayay Guddoomiye kuxigeenka 1aad Jeylaani Nuur Iikar.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa soo jeediyay in Baarlamaanka hada jira uu sii shaqeeyo illaa laga soo dhisayo Baarlamaanka soo socda 20-ka Agosto.
Labada Qodob ee lagu sameeyay wax ka bedelka ayaa kala ah Qodbka 136-aad oo dhigayay Qaadashada wax ka badalka Dastuurka iyo Qodobka 60-aad oo isna dhigaya Mudada Xil aheynta Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaanada Codka u qaaday wax ka badalka Dastuurka KMG ah ayaa gaarayay 215 Xildhibaan, waxaana ogolaatay in wax ka bedel lagu sameeyo labada qodob 208 xildhibaan, afar xildhibaan ayaa diiday, halka saddexna ay ka aamuseen.
Baarlamaanka ayaa dhowaan loo gudbiyay cutubyo ka mid ah dastuurka, kaasoo Wasaaradda Dastuurka ay dib u eegis ku sameysay, iyadoo shirar wada tashi looga hadlayay dib u eegista laga qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada.
Previous: Itoobiya iyo Eritrea oo isku eedeeyay dagaalkii xuduuda ka dhacay.
Next: Ra’isul Wasaare ku-xigeenka oo la kulmay Safiirka Dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya.